Myitter – Page 387 – News Media & Entertainment
ခရုအုန်းအတွင်းမှ အလွန်တန်ဖိုးကြီးလှသော ရွှေရောင် အမြုတေပုလဲရရှိ
ခရုအုန်းအတွင်းမှ အမြုတေပုလဲရရှိ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကံမော်ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မယ်အနောက် ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူ ကိုရိုက်ခေါင်း(ခ)ကိုထက်နိုင်ဝင်းသည် ယနေ့မနက် ပင်လယ်ထဲပိုက်ဆွဲရာမှရရှိလာသောခရုအုန်းအား ဟင်းချက်ရန် ခွဲထုတ်ရာမှာပုံပါအတိုင်း ရွှေရောင်သန်းလျက်ရှိသော အမြုတေတစ်လုံးကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ လူသိနည်းသည့် ရတနာ တစ်ပါး သို့မဟုတ် ခရုအုန်း အမြုတေ။ ပင်လယ် ငါးဖမ်းလှေများတွင် ဖမ်းယူ ရရှိသည့် ခရုအုန်း(ခေါ်) အုန်းခရု […]
ကျွန်မဘ၀နဲ့ရင်းလိုက်ရတဲ့ မောင်ရဲ့ မုသား
ကျွန်မဘ၀နဲ့ ရင်းလိုက်ရတဲ့ မောင်ရဲ့ မုသား ( ဝတ္ထု တို စ/ဆုံး ) လွင့်မျောနေတဲ့ စိတ်အစဉ်ကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာ အတောင်ပံတစ်စုံ တပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီမောင် ။ အဲဒီအေ တာင်ပံ တစ်စုံဟာ မောင်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မစိတ်အစဉ်ဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ ထာဝရတည်ရှိနေတော့မှာပါ။ မရေရာမှုတွေပေါများနေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ […]
မျက်လုံးတိမ်စွဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းများ–
တိမ်စွဲခြင်းဟာ မျက်လုံးဆိုင်ရာ ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်များဆုံး ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် အသက် ၆၀ကျော် လူကြီးတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များတတ်ပါတယ် ။ တိမ်စွဲခြင်းက မျက်လုံးကွယ်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကျဆုံး အကြောင်းအရင်းလို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။ နေ့စဉ် မုန်လာဥနီဖျော်ရည် သောက်သုံးခြင်းက မျက်စိရောဂါတွေအတွက် အကောင်းဆုံး […]
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ကိုမှ မကြည့်ပဲ ကျော်သွားရင် မင်း ဘယ်လိုပို့စ်မျိုးကို ကြည့်ချင်တာလဲ?
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စာကိုမှ မဖတ်ပဲ ကျော်သွားရင် မင်းဘယ်လိုစာမျိုးကို ဖတ်ချင်တာလဲ? ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မင်းဘ၀အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိူင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။ အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ […]
ဖက်ရှင်ကြော်ငြာတွေ ရိုက်နေရပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူလေး ဖြူဖြူထွေး
ဖေ့စ်ဘွတ်ဆယ်လီ ကျောင်းသူလေး ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ အောင်မြင်မှုကြောင့် ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးနေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ အညာသူလေးဖြစ်တဲ့ သူမက လူအများကို ဖျော်ဖြေလိုသော အနုပညာဗီဇရှိသူဖြစ်သည်။ ကျောင်းကပွဲများတွင် ဖျော်ဖြေသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များ၊ ဖေ့စ်ဘွက်ပေါ်တွင် တင်လိုက်သောဗွီဒိယိုဖိုင်များကို လူသိများခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က စတင်က နာမည်ကြီးလာသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ဇာတ်လမ်းများ […]
16.10.17 ယနေ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သတင်းများစုစည်းမှု လူမှုကူညီရေးကား ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက် Image may contain: car and outdoor 16-10-2017 9:20 Am မုံရွာမြို့ အိုးဘို​တောင်​ ရပ်​ကွက် အိန္ဒိယ မြန်​မာ ချစ်​ကြည်​​ရေး ​ဆေးရုံ ​ရှေ့မှာ အခု​လေးတင်​ဖြစ်​တာ ​ဆိုင်​ကယ်​စီးနှင်းလာသူ ဒဏ်​ရာ […]
ကုလဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့တွေ့ဆုံမည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ နေသော ကုလသမဂ္ဂဒုတိယအ တွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဂျက်ဖရီ ဖဲ့လ်မန်သည် ယနေ့ (အောက်တို ဘာ ၁၆ ရက်)တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ် သည်။ အထက်ပါကုလဒုတိယအ တွင်းရေးမှူးချုပ်သည် နေပြည် တော်၌ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမား၊ […]
မြန်မာကိုပေးအပ်မည့် ကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၇၀ ကို ဘဂါင်္လီအကျပ်အတည်းသို့ လွှဲပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သုံးသပ်
မြန်မာကိုပေးအပ်မည့် ကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၇၀ ကို ဘဂါင်္လီအကျပ်အတည်းသို့ လွှဲပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သုံးသပ် ဘာသာပြန်ဆိုသူ – ချမ်းမြေ့ ဒုက္ခသည်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးမှုအပြီးတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၇၀ ပေး အပ်ရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သုံးသပ်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနစ် […]